Marwada Madaxweynaha Somaliland oo shir caalamiya Hargeysa uga furtay Haweenka Qaaradda | Berberanews.com
Home WARARKA Marwada Madaxweynaha Somaliland oo shir caalamiya Hargeysa uga furtay Haweenka Qaaradda
Marwada Madaxweynaha Somaliland oo shir caalamiya Hargeysa uga furtay Haweenka Qaaradda
Hargeysa-(Berberanews)- Marwada Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland Aamina Sh. Maxamed Jirde (Aamina-Waris), ayaa maanta shir caalami ah oo ay ka soo qayb-galeen illaa afartan Haween ah oo ka kala socda dalalka Mandaqadda Geeska Afrika uga furtay Huteel Ambassador ee Caasimadda Hargeysa.
Shirkan oo ah Shir-madaxeedka Hoggaamiyeyaasha Haweenka Afrika ee G-40 loo yaqaanno, ayaa socon doona muddo Shan Cisho ah, waxaana lagaga hadli doonaa doorka haweenka geeska afrika ay ka qaadan karaan Arrimaha Siyaasada,Amniga iyo hogaamintaba iyadoo xubnaha ka qayb galay ay qaarkood ka socdeen Qaramada Midoobay, Urur goboleedka Igad, xubno matalayay Sideed wadan oo ku yaala bariga iyo geeska afrika iyo hay’adaha samo falka wadaniga ah ee ka hawl gala mandaqada geeska afrika.
Marwada Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland Aamina Sh. Maxamed Jirde (Aamina-Waris) oo madashaasi ka hadashay ayaa sheegtan sida ay ugu faraxsan tahay in haweenkan ka kala socda dalalka mandaqadu inay shir ku yeeshaan Caasimada Somaliland ee Hargaysa iyadoo tilmaantay in Somaliland ay tahay dal nabdoon, oo ay ka jiraan haykal dawladeed oo dhamaystiran kuna yimid hanaan dimuquraadi ah.
Marwada Madaxweynuhu waxay si faahfaahsan uga warantay doorka ay haweenka Somaliland ka soo qaateen marxaladihii kala duwanaa ee uu dalkani soo maray intii ka danbaysay dib ula soo noqoshada xornimadiisa waxaanay sheegtay in haween weynaha Somaliland ay kaalin mug iyo miisaan leh ka soo ciyaareen nabadaynta wadanka, taabo gelinta nidaam dawladeed, Kobcinta dhaqaalaha,hirgelinta hanaan doorashooyin dimuquraadi ah iyo horumarka dhinacyada badan leh ee ka muuqda Somaliland.
Aamina Sh.Maxamed Jirde, (Aamina Waris) waxay hoosta ka xariiqday in xukuumada iyo golayaasha qaranka ay dumarku ka dhex muuqdaan iyadoo marwadu xustay in Labada Gole ee Sharci dejinta ama Guurtida iyo Wakiilada ay ku jiraan Sadex xildhibaan halka xukuumadana ay ka mid yihiin Sadex Xubnood oo laba ka mid ahi yihiin Wasiiro iyo hal Wasiir ku xigeen.
Marwada Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland waxay intaasi ku dartay in kulankan ay isugu yimaadeen afartankan xubnood ee haweenka ahi oo ka kala yimid dalalka Ugandha, Koonfurta Sudan,Itoobiya, Ereteriya,Jabuuti,Somalia iyo Somaliland in looga fadhiyo sidii ay u keeni lahaayeen fikrado midho dhal ah oo wax ka tara sidii ay haweenku saami fiican uga heli lahaayeen ka qayb qaadashada hogaaminta dalalkooda.
Qaar ka mid ah Xubnaha ka qayb galay kulankan oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin imaatinkooda Somaliland isla markaana ay ka muuqato ayay yidhaahdeen nabadgalyo cago adag ku taagan oo ku timid rabitaanka shacbiga waxaa kale oo ay u mahadceliyeen xukuumada Somaliland ka taageerista inuu shirkani ka furmo Caasimada Hargaysa.
Si kastaba ha ahaatee, waa markii ugu horreysay ee shirkan oo kale Haweenka Qaaradda Geeska looga furo magaalada Hargeysa ee Caasimadda dalka Jamhuuriyadda Somaliland.
Previous articleMasuuliyiinta dawladda, Xisbiyada Qaranka, Ururrada Siyaasaadda Somaliland iyo Dadweyne ka qaybgalay Aaska laba Marxuum
Next articleMadaxweyne Sheekh Shariif oo markii ugu horreysay qiray doorka uu ku lahaa inay Al-Shabaab Soomaaliya ka dagaallanto